FALANQAYN-Hardanka Ka Socda Qaybta Warfaafinta Madaxtooyada Puntland iyo Faquuqa Warbaahinta Madaxa Banaan Miyuuse Ogyahay Madaxweyne Denni.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgasha magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa laga horjoogsadey inay duubaan dhaarinta xubnaha golaha wasiirada dowladda Puntland oo maanta ka dhacday aqalka madaxtooyada.
Saraakiil katirsan madaxtooyada Puntland ayaa warbaahinta madaxa banaan ku wargeliyey inaysan duubi karin amarna lagu siiyey in warbaahinta madaxa banaan aysan goob joog ka noqon dhaarinta wasiirada cusub.
Taasi bedelkeeda waxaa lagu wargeliyey warbaahinta inay qaataan muuqaalada ay madaxtooyadu soo duubtay marka kalaga reebo Tvga dowladda Puntland oo shaqaalihiisa loo fasaxay tebinta wararkaasi, si warbaahinta kale u qaataan kaliya wararka madaxtooyadu doonayso.
Weriyayaal tegey aqalka madaxtooyada Puntland oo doonayey inay soo tebiyaan dhacdada dhaarinta ayaa markii loo diidey madaxtooyada waraysiyo ku aadan dareenkooda ah in xilka loo dhaariyey ka soo duubay wasiiro la dhaariyey waxaase wariyayaashii loo sheegay inay tirtiraan waraysiyaadaasi haddii kale aysan madaxtooyada dib u soo geli doonin.
Waqtigii magacaabista golaha wasiirada dowladda Puntland ayaa warbaahinta madaxa banaan loo diidey inay goob joog ka noqdaan waxaana lagu khasbay inay muuqaalka madaxtooyada oo kaliya ay saf u galaan iyadoona saraakiisha madaxtooyadu sheegeen inuu yahay amar madaxweyne.
Waxaa xogtu sheegaysaa in madaxweynaha dowladda Puntland uu bixiyey amarkaani si kor loogu qaado Tvga dowladda Puntland, waxaase dadbadani u arkaan in cadadis warbaahineed uusan fursad u ahayn Tvga dowladda uuna u baahan yahay in loo dhammaystiro adeegyada kale ee uu u bahana yahay.